Wasiir Xaamud: Aduunku ma sii bixin karo lacagta ku baxda AMISOM, marka … – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah wafdi la socda R/wasaaraha Soomaaliya oo booqasho dalal ka mid ah Yururb ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamku ay ka wadatashanayaan qorshaha mustaqbalka dhow ee dhisidda ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ula wareegaan 2016-ka ammaanka guud ee gudaha Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, General Maxamed Sheekh Xasan oo ka mid ah wefdiga Xukuumadda ee London uga qeyb-galaya shirka lagu taageerayo ciidammada Xoogga oo ay ka qeyb-galayaan Bulshada Caalamka madax ka socota, ayaa sheegay in Ajendaha ugu muhiimsan shirkaasi in uu ahaa sidii loo dejin lahaa Qorshe cad oo la xiriirra halka ay hiigsanayaan ciidammada Xoogga Soomaaliya iyo awoodda taageerada Caalamka ay ugu baahan yihiin inta ay la egtahay.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa yiri “Ra’iisul wasaaraha ayaa guddoomiyey shirkii London, dowladda Ingariiska ayaa qaadaneysa door muhiim ah, annaga waxaan madaxda shirka timid hor dhignay qorshaheenna ku aaddan dhismaha ciidammada Military-ga iyo waqtiga lagu dhammeyn karo howshaasi, iyadoo intaasi ay ku darsan tahay taageero dhaqaale iyo aqoon oo uu caalamku ku bixiyo ciidammadaasi”.
General Maxamed Sheekh Xasan Wasiirka Difaaca Soomaaliya ayaa tilmaamay in ciidammada AMISOM dhaqaalaha ku baxa hadda adduunka uusan sii wadi Karin in uu bixiyo, lagama maarmaanna ay tahay in la helo ciidammadii badeli lahaa AMISOM, waxa uu intaa raaciyey in AMISOM ay isu diyaarin doonaan sidii ay uga bixi lahayd dalka Soomaaliya ammaankuna ay la wareegi doonaan ciidammada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan caalamka ka codsatay in si dhab ah loo dhiso ciidamada kala diwan ee qalabka sida si looga maarmo ciidamada shisheeye.